बिग ब्यास : सिड्नीद्वारा पर्थ पराजित | KhelNepal
जोश फिलिप्पे र र जेम्स भिन्स चम्कदा अष्ट्रेलियामा जारि बिग ब्यास लिग अन्तर्गत शनिबार समपन्न ४१ औं खेलमा सिड्नी सिक्सरले पर्थ स्कोर्चर्समाथि ७ विकेटको सहज जित दर्ता गरेको छ।
जितसंगै ११ खेलमा ८ जित र ३ हारसहित ३२ अंक जोड्दै अंकतालिकाको शिर्ष स्थानमा रहेको सिक्सरले आफ्नो अग्रता बढाएको छ। स्कोर्चर्स भने १० खेलमा ५ जित र ४ हारपछि २१ अंक बटुल्दै अंकतालिकाको तेस्रो स्थानमा यथावत छ।
A win to sing and dance about for the @SixersBBL 🕺 #BBL10 pic.twitter.com/mKyp5t84zv
क्यानवेरा स्थित मानुका ओभल मैदानमा समपन्न खेलमा १६४ रनको चुनौतिपूर्ण लक्ष्य पछ्याएको सिक्सरले १८.५ ओभरमा ३ विकेट गुमाएर लक्ष्य पुरा गर्यो। उसको लागि ओपनरद्वय फिलिप्पेले ५२ बलमा १० चौका र १ छक्काको मद्धतमा सर्वाधिक ८४ रन बनाए। हालसम्म प्रतियोगिताको सर्वाधिक रनकर्ता समेत रहेका फिलिप्पेले जारि सिजन तेस्रो अर्धशतक प्रहार गरेका हुन्। भिन्सले ३२ बलमा ५२ रन बनाए जुनक्रममा ५ चौका र १ छक्का हिर्काए।
फिलिप्पेले ५२ बलमा सर्वाधिक ८४ रन बनाए
जस्टिन अवेंदनो ८ रन बनाएर आउट भएपछि फिलिप्पे र भिन्सले दोस्रो विकेटको लागि १०६ रनको शतकीय साझेदारी गर्दै सिक्सरको इनिंग अघि बढाए। लगातार ओभरमा फिलिप्पे र भिन्स आउट भएपछि कप्तान ड्यानियल ह्युज र ड्यानियल क्रिस्टियनले सिक्सरलाई जितसम्म डोर्याए। ह्युजले ९ बलमा अविजित ११ तथा क्रिस्टियनले ४ बलमा अविजित ७ रन बनाए।
स्कोर्चर्सको बलिंगतर्फ जाए रिचर्डसन, जेसन बेहरेन्डोर्फ र फवाद अहमदले समान १ विकेट लिए।
यसअघि ब्याट फिलिप जितेर ब्याटिंगको निर्णय लिएको स्कोर्चर्सले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १६३ रन बनाएको थियो। स्कोरर्चर्सको ब्याटिंगमा लियाम लिभिङ्गस्टोनले ३८ बलमा ३ चौका र ६ छक्काको मद्धतमा सर्वाधिक ६७ रन बनाए। कलिन मन्रोले ३४, ज्याशन रोयले २१ तथा ॲरन हार्डीले १२ रन बनाउँदा अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्।
Liam Livingstone is LOVING Manuka Oval. He’s moved to 66 from 35 balls, and isn’t slowing down! #BBL10 pic.twitter.com/6tL9qvRzcB
ओपनरद्वय रोय र लिभिङ्गस्टोनले पहिलो विकेटको लागि ७६ रनको आक्रामक साझेदारी गरे। रोय आउट भएपछि लिभिङ्गस्टोनले मन्रोसँग दोस्रो विकेटको लागि २७ रनको साझेदारी गर्दै स्कोर्चर्सको इनिंग सम्हाले। त्यसपछि १८ रनको अन्तरालमा ४ विकेट गुमाउँन पुग्दा स्कोरर्चर्स विशाल योगफल बनाउँनबाट चुकेको थियो।
सिक्सरको बलिंगमा कार्लोस ब्रेथवेट, ज्याक बल र ड्यानियल क्रिस्टियनले समान २ विकेट लिए भने स्टिभ ओ’किफले १ विकेट हात पारे।